日本で働きたい方へ（ミャンマー） | 日本で働きたい方へ | 外国人採用・紹介ならkedomo
မင်္ဂလာပါရှင်! မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်ရှာပေးခြင်းကို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အင်တာဗျူးအတွက် ကြိုတင်စာရင်းပေးခြင်းနှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
Kedomo တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ကူညီ‌ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
CV form ရေးရာတွင် ကူညီပေးခြင်း
ဗီဇာအတွက် လိုအပ်သည့် အရာများအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း နှင့် နေထိုင်ရန် အဆောင်လည်းရှာပေးပါသည်။
မြန်မာစကား ပြောနိုင်သည့် ဝန်ထမ်း နှင့် Career Consultant လက်မှတ် ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဝန်ထမ်းလည်းရှိပါသည်။ နွေးထွေး ရင်းနှီးစွာ ကူညီဆောင်ရွက်‌ပေးခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် စိတ်ချ လက်ချ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
kedomo ၏ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးသည် အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ဂျပန်အလုပ်ခေါ်စာများကို Facebook တွင် တင်ပေးထားသည့်အတွက်
Like and followလုပ်ထားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့နော် ။
Janet for mnm 日本の仕事
03.အင်တာဗျူးအတွက် အခမဲ့ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း
ဂျပန်စာ သင်တန်းကျောင်းများတွင် အင်တာဗျူးအတွက် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းရှိနိုင်သော်လည်း kedomo ၏ အင်တာဗျူး လေ့ကျင့်ပေးသူသည် ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှ အလုပ်ခန့်သည့်တာဝန်ခံနှင့် အမြဲအဆက်အသွယ်ရှိ‌ပြီး စကားပြောနေသည့် ဝန်ထမ်း ဖြစ်သောကြောင့် ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျ လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ မြန်မာဘာသာစကားပြောနိုင်သည့် ဝန်ထမ်းလည်း ရှိသည့် အတွက် ဂျပန်ဘာသာစကား သိပ်မကျွမ်းကျင်သေးသည့်သူများ အတွက်လည်း စိတ်ချရပါတယ်ရှင်။※Monday to Friday မနက် (10)နာရီခွဲ မှ ညနေ (4)နာရီအတွင်း တစ်ရက်လျှင် တစ်ယောက်နှုန်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။
စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်ချက် နှင့် နည်းလမ်း
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အခြေအနေဖြင့် ကိုက်ညီသူသည် အင်တာဗျူးအတွက် အခမဲ့လေ့ကျင့်ခြင်းကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ ၊IT ကုမ္ပဏီ၊ ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေး ၊စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း စသည်ကို ရည်ရွယ်သည့် သူများ (ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သက်ရောက်မှုကြောင့် အခြားအလုပ်များ မိတ်ဆက်ပေးခြင်းကိုတော့ ရပ်နားထားဆဲဖြစ်ပါသည်)
ဂျပန်စာ N3 Level အထက် (JLPT အောင်လက်မှတ်မရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်)
Facebook (သို့)အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စာရင်းသွင်းနိုင်သည့် Form တွင်လည်း ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။「အသက်」「ရှာနေသည့် အလုပ်」「အလုပ်အတွေ့အကြုံ」「လေ့ကျင့်နိုင်သည့် ရက် နှင့် အချိန်」ကို မပျက်မကွက်ရေးပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော် ။
မြန်မာ ・26 နှစ်
Electrical Designဆွဲခြင်းကို အလုပ်ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်!
မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်အလုပ်ဝင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီသည် ဟခန်း (အငှား) ကုမ္ပဏီဖြစ်တာမို့လို့ စိတ်ချလက်ချ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်သည့်အလုပ်ကို ရှာရန်အတွက် kedomo နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။ ဆေးပစ္စည်း ကိရိယာများကို ပြုလုပ်သည့် ကုမ္ပဏီတွင် မိတ်ဆက်ပေးပြီး အင်တာဗျူးဖြေရန် အတွက် လည်း အတူလိုက်ပေးသည့် အတွက် တကယ့်ကိုအကူအညီ ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ်။
မြန်မာ ・22 နှစ်
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်သင်ဗီဇာဖြင့် (3)နှစ်ကြာ လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ဝါသနာဖြစ်သည့် ဟင်းချက် အလုပ်ကိုလုပ်ရန် တိုခုတေးဂီနိုးဗီဇာကို ယူပြီး
စားသောက်ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် အိပ်မက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ kedomo နှင့် ဆွေးနွေး၍ CV form ရေးပုံရေးနည်း အတွက် အကြံပေးခြင်းကို ရခဲ့ပြီး အင်တာဗျူးအတွက် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းကိုလည်း ရယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာဗျူးကို အကောင်းဆုံးဖြေနိုင်ခဲ့ပြီး စားသောက်ဆိုင်တွင် အလုပ် ဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗီယက်နမ် ・28 နှစ်
ခမ်းနားထည်ဝါပြီး Interior designကို ပြုလုပ်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ အလုပ်‌ရှာခြင်း!
ဂျပန်တွင် ( ၂ ) နှစ်ကြာ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းကုမ္ပဏီတွင် အဆောက်အဦး စီမံခန့်ခွဲမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ Interior design ဆွဲခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသည့် အတွက် kedomo မှ ခေါ်ယူသည့်အလုပ်ကို လျှောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ပရိဘောဂပြုလုပ်သည့် အလုပ်ဖြစ်သည့် အတွက် ဗီယက်နမ်ဘာသာစကားကိုလည်း အသုံးချနိုင်ပြီး‌တော့ ပထမတန်းစား ဟိုတယ်၏ Interior design ကိုလည်းတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အတွက် အတွေ့ အကြုံအများကြီး ရနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးအတွက် စာရင်းသွင်းသည့် အချိန်တွင် အသက် ၊ မိမိရှာနေသည့် အလုပ်၊ အလုပ်အတွေ့အကြုံ ၊ လေ့ကျင့်နိုင်သည့် ရက်နှင့်အချိန်ကို မမေ့အောင် ရေးပေးပါရှင့်။
Janet for mnm